Doodda Jimcaha - BBC Somali
10 Oktoobar 2014
Image caption Uhuru Kenyatta waa Madaxweynihii ugu horreeyay oo isagoo xilka haya hortaga ICC
Toddobaadkan waxaa maxkamadda dambiyada dagaalka ee Hague tagay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo loo heysto dacwad la xiriirta inuu ku lug lahaa rabshadihii ka dhacay kaddib doorashooyinkii Kenya 2007.
Waa Madaxweynihii ugu horreeyay ee isagoo xilka haya hortaga maxkamaddaasi. Haddaba doodda galabta waxaan ku eegeynaa ilaa hadda madax Afrikaan ah unbaa dacwado loo heystay, haddaba Maxkamadda ICC ma tahay mid u siman dalalka adduunka?
Maxkamadda Caalamiga ee dambiyada dagaalka waxaa loogu talagalay in ay dacwad ku soo oogto dambiyada ugu xun ee caalamka ka dhaca. Dambiyada ka dhan xuquuqda aadanaha, Xasuuqa, Dambiyada dagaal.
Waxaa isku raacay maxkamaddan 121 dal. Waa maxkamadda ugu dambeysa ee la geeyo wixii dambiyo ah ee dhacay ilaa 2002.
In lagu qaldo maahan maxkamadda caalamiga ee caddaaladda ama maxkamaddii loo sameeyay Yugoslavia hore ama Rwanda.
Image caption Fatou Bensouda waa dacwad oogaha guud ee ICC
ICC waxay isticmaashaa oo ay isku halaysaa ciidamada booliiska dalalka saxiixay inay soo xiraan qofka, una soo gudbiyaan.
Muddo 11 sano ah oo ay shaqeyneysay maxkamaddu waxay si rasmi ah u xukuntay laba kiis oo labaduba la xiriiray dagaallada qawmiyadaha u dhaxeeya ee Jamhuuriyadda Dimquraadiga Kongo.
ICC waxay dacwad ku soo oogtay Afrikan uun waxaana lagu eedeeyaa in aanay dhexdhexaad ahayn. Gumeysi cusub.
Midowga Afrika Wuxuu u sheegay xubnaha in aan la xirin Madaxweynaha Sudan oo ICC ay dacwad u heysato xasuuq la xiriira.
Madaxweynihii hore ee Ivory Coast Laurent Gbagbo waxaa isna loo heystaa dambiyo ka dhan ah aadanaha kadib doorashooyinkii 2010.
Uhuru Kenyatta isna waxaa loo heystaa inuu ku lug lahaa rabshadihii ka dhacay doorashooyinkiid dalkaasi 2007/2008 oo ay ku dhinteen in ka badan kun qof.